Ampio ny toeran'ny tranokalanao ao amin'ny tranokalanao miaraka amin'ny rakitra KML | Martech Zone
Ampio ny toeran'ny tranokalanao ao amin'ny tranokalanao miaraka amin'ny rakitra KML
Alatsinainy Oktobra 15, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mety tsy fantatrao izany, fa hanondro ny toerana misy anao ny toerana misy anao sy ny pejinao hafa Google. Izany dia azo atao tsara indrindra amin'ny fanomezana a Fisie KML miaraka amin'ireo mpandrindrao amin'ny endrika XML - endrika mora vakiana amin'ny alàlan'ny interface interface.
Aza avela hampitahotra anao izany! Tena mora ny manangana rakitra KML ary manampy azy ao amin'ny tranokalanao. Raha ny marina dia manana tranokala iray aho izay hanangana ny rakitra KML anao hahafahanao misintona azy, Amboary ny adiresy. Nampidiriko ireo fiasa ho an'ny fisintomana anio!
Manamboara rakitra mora amin'ny KML:
Ampidiro ao ny adiresinao Amboary ny adiresy ary manolotra. Raha tsy marina ny toerana eo amin'ny sari-tany, dia azonao atao ny misintona ny marikao amin'ny toerana tena izy (mahafinaritra be, huh?). Ho hitanao izao ny rohy "Misintona" amin'ny lohatenin'ny faritra KML. Rehefa tsindrio ity dia azonao atao ny misintona ilay rakitra handefasana ao amin'ny tranokalanao aorian'izay.
Hanitsy ny fisie ihany koa aho (ampiasao ny mpamoaka lahatsoratra) ary ampiako eo anelanelan'ny marika famaritana ny anaran'ny bilaoginao Ohatra:
Ny anaran'ny tranokalako> / famaritana>
Ampio ny KML ao amin'ny tranokalanao:
Raha mihazakazaka WordPress ianao dia tsy maintsy mihazakazaka ny XML Sitemap Generator Plugin by Arne Brachhold - tsy hahita plugin tsara kokoa na ilaina kokoa ianao na aiza na aiza! Iray amin'ireo endrika mampiavaka an'ity plugin ity ny manampy ny rakitra KML ao aminy. Ampidiro fotsiny ny URL feno ny sitemap ao amin'ny fizarana pejy fanampiny:
Raha tsy manana WordPress ianao dia hahita torolàlana ao amin'ny Google momba ny fomba hanampiana ny fanondroana ny KML amin'ny sitemap anao.
Dia izay! Amboary ny fisie KML, ampidiro ao amin'ny tranokalanao ilay rakitra ary ampio ao amin'ny Sitemap anao.
Tags: faritrageolocationKMLseo eo an-toeranaMap
Andro fiasan'ny bilaogy: rano sy solika
Aug 6, 2008 amin'ny 11: 29 AM
OK, ka aleo mody hoe manana tranokala natao ho an'ny Decompression momba ny hazondamosina aho ary any Chula Vista ny adiresiko. Tena ho sarotra ho ahy ny milahatra ho an'i San Diego satria ny adiresiko dia mampiseho fa tsy eo aho. Raha nanova ny fisie KML nataoko tamin'ny http://www.addressfix.com/ ary afindra any San Diego, avy eo, raha te hilaza an-tsaina fa tokony hanana olana kely kokoa amin'ny filaharana "decompression hazondamosiko san diego?
6 Aogositra 2008 amin'ny 1:08 PM
Hypothetically, eny. Tsy mbola namaky momba ny jeografia efa nanomboka nandanja ny valiny aho, fa Google kosa manohy manamboatra ny algorithman'izy ireo mba hahitana valiny tadiavin'ny olona tsy miankina amin'izay hitan'ny besinimaro fa malaza. Ny fitsapana foana no fomba hahitana izany!
Sep 4, 2011 amin'ny 4: 52 AM
Hey gang misaotra noho ity fampahalalana mamy tao amin'ny KML ity. Nieritreritra an'io fotsiny aho androany ho an'ny mpanjifa ary mila ny rohy sy ny fampahalalana ankapobeny nampidirinao teto. Tsy fantatro izay hitarika ny soso-kevitro ho an'ny mpanjifa, saingy heveriko fa nanampy ahy hanombohana tokoa ianao.
Fiarahabana (ary Misaotra!)
Sep 4, 2011 amin'ny 4: 56 AM
Miloka ianao! Tena mankasitraka anao mandany fotoana hampahafantaranay anay.